Umaka: Isikhungo Sokumaketha Nge-imeyili | Martech Zone
Umaka: Isikhungo Sokumaketha nge-imeyili
UDelivra Uvula Iwebhusayithi Entsha
NgoLwesine, Januwari 19, 2012 NgoLwesine, Januwari 19, 2012 UJenn Lisak Golding
Umxhasi wethu wokumaketha nge-imeyili, uDelivra, wethule iwebhusayithi enhle namuhla, eyenzelwe futhi yathuthukiswa abanye abangane bethu abahle, iSpinWeb, kwi-Accrisoft Freedom. UDelivra ube ngumxhasi we Martech Zone izinyanga ezi-3, futhi sikuthandile ukusebenzisana naleli qembu elinikezelwe ngamakhasimende nelinolwazi olususelwe e-Indianapolis. Ipulatifomu lokumaketha le-imeyili lakwaDelivra linikela ngezici ezahlukahlukene ezihambelana nezidingo zabakhangisi, abaphathi bezinga le-C, nabathuthukisi, kufaka phakathi ukuphathwa kohlu, umhleli weWYSIWYG, ukuhlukaniswa,
Ungadinga Isazi Sokumaketha Nge-imeyili Uma…
NgoLwesihlanu, January 8, 2010 NgoMgqibelo, Okthoba 18, 2014 UScott Hardigree
Akunandaba ukuthi uqashe i-ejensi yokuthengisa ye-imeyili noma ithalente elisendlini; lo mhlahlandlela uzokusiza ukuthi uhlole imizamo yakho yamanje futhi uthole inani elithe xaxa ekukhangisweni kwakho kwe-imeyili.
Ukuqonda ukuthi kungani futhi okulingene…
NgoLwesithathu, uDisemba 5, 2007 NgoLwesine, Juni 11, 2009 Douglas Karr
Ngokusho kwe-Dictionary.com: Medium: enye yezindlela noma iziteshi zokuxhumana okujwayelekile, ulwazi, noma ukuzijabulisa emphakathini, njengamaphephandaba, umsakazo, noma ithelevishini. Mhlawumbe umsebenzi onzima kakhulu kunoma iyiphi isoftware njengensizakalo ukunqoba ama-paradigms omkhakha owusebenzelayo. Ngizokhuluma ngqo embonini yokudlela kulesi sibonelo, kepha kuyefana nganoma iyiphi enye inkampani ye-ecommerce… ukuqonda ukuthi amakhasimende akho akwenzani ku-inthanethi esitolo sakho, ku